Cadaado: Magac iyo Maamuus Lagu Gaaray Midnimo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Cadaado: Magac iyo Maamuus Lagu Gaaray Midnimo
Cadaado: Magac iyo Maamuus Lagu Gaaray Midnimo
Cadaado (XT): Magaalada Cadaado ee gobolka Galagaduud ayaa waxa ay noqotay magaalo ay hadalhaynteedu aad u badantahay beryahaan dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Sababtuna waxa ay tahay shirweynaha maamul u dhisidda gobollada Mudug iyo Galgaduud oo ka furmay magaaladaasi bishii hore muran dheer kaddib , markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalliyey khilaafkii u dhexeeyey Dhuusamareeb iyo Cadaado ee martigelinta shirka ku saabsanaa. Runtii waxay ahayd guul u soo hoyatey reer Cadaado in shirka lagu qabto magaaladooda, taas oo ay ka helayaan magac ,maamuus iyo hanti. Waxaa waxgaradka Cadaado ayaa maamuuskaan ku muteysteen midnimada dadkooda iyo sida waxgaradkoodu ugu dhabar adeygeen in shirka Cadaado lagu qabto si shacabka Cadaado uga faa’iidaan, wayna u ahaatay. Qiimaha kirada guryaha Cadaado ayaa si xad dhaaf ah samada isugu shareeray , tusaale ahaan gurigii kiradiisu ahayd shirka ka hor 200 doollar hadda waxaa uu gaarey 3000 oo dollar.
Afarta musharax ee caddeystay ilaa iyo hadda in ay u taaganyihiin tartanka madaxtinimada gobolada dhexe ayaa wararku sheegayaan in midkiiba ugu yaraan 4 guri oo waaweyn in uu kireystey . waxay laciir ciireysaa Cadaado dad badan oo siyaabo kala duwan u yimid magaalada oo ka kala yimid degmooyinka Mudug iyo Galgaduud, Banaadir iyo gobalada kale ee dalka iyo qurba joog deegaannadaasi u dhashay. Qiimaha badeecooyinka kala duwan ayaa lasheegayaa in uu aad u sarakacay, sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan Cadaado.
Bilicda cadaado ayaa noqotay mid aad u soo jiidatey martida haatan ku sugan iyaga oo layaabay guryaha dhaadheer ee degmadaasi laga dhisay tobankii sano ee ugu danbeysey, taas oo ka dhigeysa Cadaado degmada ugu dhismaha dhaadheer degmooyinka. Wariyayaalka ku sugan Cadaado ayaa u xaqiijiyey Xaqiiqa Times in ay u bogeen sida reer Cadaado ugu dadaalayaan in ay u raali galiyaan martida u timid shirka. Bahada Wargeyska Xaqiiqa Times waxay lawadaagayaan reer Cadaado raynraynta iyo nabadda ay ku gaareen midnimadooda waxaana ugu hanbalyeyneynaa horumarka iyo martigelinta shirweynaha gobollada dhexe.
Previous articleSiyaasadda iyo Soohdinta Sarkaalka
Next articleMa Ogtahay Madaxweyne